Iminyuziyamu edume kakhulu yaseSpain ku-Instagram - Okumele ukubone | Izindaba Zokuhamba
Iminyuziyamu edume kakhulu yaseSpain ku-Instagram
USusana godoy | | Ukuzilibazisa
Kuzo zonke izinkambo esizenzayo, enye yezinto okumele sizibone yilezi ezisenza sijabulele ubuciko. Kwesinye isikhathi asikunaki futhi iqiniso ukuthi siphuthelwa yimizuzu embalwa yenani elingenakubalwa ezimpilweni zethu. Ngakho-ke, kufanelekile ukwazi ngamunye wegama le- iminyuziyamu edume kakhulu yaseSpain, nokuthi kufanele sikunake ekubalekeni okuzayo.
Uma sikubo, singathatha isithombe sobulukhuni bese sihlanganyela nabo bonke abalandeli bethu nge-Instagram. Okuthile osekuyinto ejwayelekile! Ikakhulukazi lapho lesi sithombe silandelwa 'ama-hashtag' angapheli, ukuze ngale ndlela ukuvelela kwawo kufinyelele kubantu abaningi. Ngayo futhi ngenxa yengosi ekhethekile i-Holidu, kwenzeke ukuthola ukuthi yimiphi iminyuziyamu edume kakhulu yaseSpain. Ngabe kukhona oshiye ngaphandle kokuvakashela?
1 Iminyuziyamu edume kakhulu yaseSpain ku-Instagram: Museum of Contemporary Art of Barcelona
2 IPrado Museum eMadrid
3 IGuggenheim Museum eBilbao
4 IMyuziyamu yaseReina Sofía yaseMadrid
5 Umnyuziyamu waseThyssen-Bornemisza
6 I-Dalí Museum eGirona
7 Isikhungo sase-Andalusian sobuciko besimanje
8 Institut Valencià d´Art Isimanje
9 'I-Artium', iBasque Center-Museum of Contemporary Art
10 IPicasso Museum eBarcelona
Iminyuziyamu edume kakhulu yaseSpain ku-Instagram: Museum of Contemporary Art of Barcelona
Ifana neminyuziyamu edume kakhulu nge-Instagram. Lokhu kungenxa yokuthi ingenye yezindawo okukhulunywa kakhulu kuzo, ezinengqikithi ye-147 662 ebaluliwe. Inani eliphakeme lendawo esemqoka ezweni lethu. Kuyo, sizothola imisebenzi yobuciko engaphansi kwengxenye yesibili yekhulu lama-XNUMX. Kunjalo imisebenzi engaphezu kuka-5 000 esukela ngeminyaka yama-50 kuze kube namuhla, lapho isitayela se-pop yaseYurophu sihlanganiswa nama-avant-gardes abephumelela phakathi kweminyaka yama-60 kanye nama-70s. Uma ufuna ukuyivakashela, ungakwenza lokho endaweni yase-'El Raval '. Yaziwa nangokuthi 'i-MACBA', kumenyezelwe njengemyuziyam enentshisekelo kuzwelonke. Ngokusho kwengosi Holidu, izithombe ezivame kakhulu ku-Instagram azisathathwa ngaphakathi kwale Museum, kepha endaweni ebiyelwe ngaphandle. Indawo ephelele yabo bonke abathandi be 'skate'.
IPrado Museum eMadrid
Siyazi ukuthi uma sikhuluma ngeminyuziyamu edume kakhulu yaseSpain, iPrado Museum bekufanele ibe kulolu hlu. Ingenye yezidume kakhulu, hhayi eSpain kuphela, kepha emhlabeni wonke. Ngokubanzi, kungashiwo ukuthi inemisebenzi kusukela ngekhulu le-XNUMX nele-XNUMX. Lapha sizojabulela isebenza nguGoya kanye noVelázquez noma u-El Greco, ngaphandle kokukhohlwa iBosco, okuqoqwa kwayo kungenye ephelele kakhulu. Uma ukubaluleka kwalesi sigcinamagugu kufanele kufingqwe ngomusho owodwa, kungaba ukuthi sinezinto ezibaluleke kakhulu emasikweni ethu. Kepha uma ubuyela ku-Instagram, bangu-116, lapho 'iLas Meninas' kungumsebenzi odume kunayo yonke kwinethiwekhi yokuxhumana nabantu. Ungayivakashela, ngendlela ezolile phakathi nesonto nangehora lasekuseni.
IGuggenheim Museum eBilbao
Uma isivele ibalulekile uqobo lwayo, ku-Instagram ikhuphuka ngezinkulumo ezingaphezu kwe-100. IGuggenheim Museum iyimyuziyemu yobuciko yangaleso sikhathi. Yavulwa ngo-1997 futhi yaqokomisa umqondo omusha kakhulu wesakhiwo ohluke ngokuphelele kulokho esasijwayele. Ngaphezu kwalokho, isebenza eNew York kanye nezinye izingcezu ezibolekwe kweminye iminyuziyamu. Izakhamizi ezingaphezu kwesigidi ngonyaka, zingabonakala kuleli phuzu futhi kwabaningi, i- umfanekiso wesidlwane kusuka phesheya kungenye yezinto okukhulunywe ngazo kakhulu. Yize uMsombuluko uvaliwe, ezinye izinsuku ekuseni zimbalwa abantu, okuzosivumela ukuthi sithathe izithombe ezingcono.
IMyuziyamu yaseReina Sofía yaseMadrid
Kwakungo-1990 lapho kuvulwa iMnyuziyamu iReina Sofía. Kuyo sizothola ubuciko bekhulu lama-XNUMX nobesikhathi samanje. Itholakala endaweni yase-Atocha futhi umsebenzi wayo owaziwa kakhulu yi 'IGuernica' kaPicasso. Kepha ngaphezu kwalokho, kukhona nemisebenzi emikhulu kaJoan Miró noma uSalvador Dalí, ngaphandle kokukhohlwa ubuciko be-surrealist kaMagritte noma u-Óscar Domínguez. Kukho konke esingakuthola kukho, sekungomunye weminyuziyamu evakashelwa kakhulu. Ngaphandle kokuqhubeka, ngo-2016 yephule umlando wayo ngokuvakashelwa ngaphezu kwezigidi ezintathu nengxenye.
Le mnyuziyamu ibinamagama abaculi abengekho kwenye indawo. Kepha hhayi lokho kuphela, kepha ungabona nemibukiso ehlukene kanye nemisebenzi. Amaqoqo agcinwe lapha ahlukahlukene kakhulu, kusukela ku-Renaissance yase-Italiya, kudlula eRubens noma eCaravaggio, kuya eRembrandt's Dutch Baroque. Kokubili isitayela seRococo kanye neqiniso likaManet kanye ne-impressionism kuyahlangana kule Museum okufanele ibonwe. Yize kwabaningi, omunye wemisebenzi eyinhloko yi- 'Owesifazane endlini yangasese' nguRoy Lichtenstein.
I-Dalí Museum eGirona
Iningi lalo linikezelwe imisebenzi yomdwebi uSalvador Dalí. Uzokuthola esigcawini IGala Salvador Dalí, e-Figueras. Imininingwane ibonisa ukuthi ngonyaka we-2017, bekungumnyuziyamu wesithathu ovakashelwa kakhulu eSpain. Yize kuliqiniso ukuthi yonke imisebenzi ine-protagonism enkulu, kwabaningi be-netizens, esinye sezithombe okufanele siboniswe yi-facade yabo. Umbhoshongo ohlotshiswe ngamaqanda amakhulu uheha ukunakwa okuningi futhi okushiwo kwawo kufinyelela ngaphezu kwe-15.
Isikhungo sase-Andalusian sobuciko besimanje
Njengoba igama layo liphakamisa, ubuciko besikhathi samanje buzoba ophambili kule ndawo. Kutholakale, kusukela ngo-1997, eMonastery yaseSanta María de las Cuevas. Kuyo uzothokozela imisebenzi yobuciko engaphezu kuka-3 000, yize kwabaningi, kuphela isakhiwo noma ICartuja Monastery, konke kungubuciko. Ngalesi sizathu, izithombe ezivame kakhulu zizoqhamuka kule ngxenye engaphandle, kepha uma usuvele ukuyo, ungaphuthelwa ngaphakathi ngoba ihlale yaziswa kakhulu futhi inezincazelo ezingaba ngu-15.
Institut Valencià d´Art Isimanje
Ngo-2013 kwakungowesine eminyuziyamu yaseSpain evakashelwa kakhulu. Idalwe ngo-1986 ukuze ubuciko besimanjemanje buphathe ukwengeza ukuthintwa kwayo kokuqeda. Imisebenzi engaphezu kuka-10 isuselwe kulokhu Ubuciko bekhulu lama-XNUMX. Kuleli qophelo ungathola futhi zombili izifundo, ama-workshops namakhonsathi noma izingqungquthela. Mhlawumbe omunye wemibukiso ehlonishwayo yilowo ka-Anette Messager.
'I-Artium', iBasque Center-Museum of Contemporary Art
E-,lava, Izwe laseBasque, sithola omunye weminyuziyamu ethandwa kakhulu eSpain. Ngaphakathi, kuhlala imisebenzi yaseBasque neyaseSpain kusukela ngekhulu lama-2002 nelama-XNUMX. Ibuye ibe nemibukiso yesikhashana futhi ihlale ixhumene nezindikimba zamanje kakhulu. Yavulwa ngonyaka we-XNUMX futhi phakathi kwayo yonke imisebenzi yakhe, i- izithombe zikaMiquel Navarro. Uyaduma futhi naku-Instagram ngokushiwo kwakhe okungaphezulu kuka-10.
IPicasso Museum eBarcelona
Kunemisebenzi engaphezu kwe-4 ngungqondongqondo uPicasso esingayithola kule ndawo. Hhayi kuphela kumdwebo, kodwa futhi nakokuqoshwa, imidwebo noma ukuqoshwa. Kungashiwo ukuthi kungenye yeqoqo eliphelele kakhulu elikhona. Ivulekele umphakathi jikelele ngo-200 futhi mhlawumbe okuphawuleka kakhulu kumanethiwekhi yilawa 'Izithombe zikaPicasso' nguDouglas Duncan. Uma uzibuza ngokushiwo enakho ku-Instagram, kufanele kuthiwe cishe ku-9 660. Usuke wabahambela bonke?
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » General » Ukuzilibazisa » Iminyuziyamu edume kakhulu yaseSpain ku-Instagram
Amawa omlingo kaMoher
ISaona Island, engaziwa ngeDominican Republic